Shot Zinc / Zinc Goo Wire Shot - Shiinaha Shanghai Bosun sugi lahaayeen
shot MUUJINTA Zinc lagu sameeyey habka of sawir, jarida iyo qaboojiyaha iwm .. Oo ay waxaa loo isticmaalaa deburing iyo nadiifinta on daawaha Aluminum kala duwan, Zinc dhiman castings. Maxaa yeelay, cuf gaar ah ayaa ku dhow inuu bir iyo qalbi engegnaantooda aawadeed waa yar yahay, deburing lagu samayn karo iyada oo aan xiran meelaha wax soo saarka '. Haddii kale distinguished ka Aluminum sugi lahaayeen, ammaanka waa wax fiican waayo dhibic kinding ciidda ka badan hoose. Oo waxay sidoo kale lagu gartaa at caddeeyo cad on the ...
shot Zinc lagu sameeyey habka of sawir, jarida iyo qaboojiyaha iwm .. Oo ay waxaa loo isticmaalaa deburing iyo nadiifinta on daawaha Aluminum kala duwan, Zinc dhiman castings. Maxaa yeelay, cuf gaar ah ayaa ku dhow inuu bir iyo qalbi engegnaantooda aawadeed waa yar yahay, deburing lagu samayn karo iyada oo aan xiran meelaha wax soo saarka '. Haddii kale distinguished ka Aluminum sugi lahaayeen, ammaanka waa wax fiican waayo dhibic kinding ciidda ka badan hoose. Oo waxay sidoo kale lagu gartaa at caddeeyo cad on dusha qaybo shaqada.
Zinc jaray shot silig sugi lahaayeen bixisaa warbaahinta ah oo aad u yar engegnaantiinna Rockwell B (20 - 30) haboon in loo isticmaalo in deburring castings dhiman.
Shot Zinc waa awood ay ka saareen ilaa flash in .020 "ka castings dhiman.
Zinc toogtay ayaa sidoo kale ka dhigeysa in dhigaalka ah zinc on shay shaqada bixiya iska caabin ah daxalka ah.
Shot Zinc waxaa sidoo kale loo isticmaalaa inay dharka rinjiga iyo budada blaastiigga. Debecsanaanta ee shot zinc waa mid aad wax ku ool ah ee ay ka saareen blaastiigga oo aan waxyeelo u tooling.
shirkadda Our qaadi kartaa baakadaha-xidhkii bac, baakadaha bacda ton, baakadaha saxaarad alwaax, baakadaha xirxirida caag ah oo u eg sida ay shuruudaha macaamiisha
Zinc Goo shot
Alfa lahayo ku
Si ballaaran loo isticmaalo biraha loo shubay dhiman; shubay sax, saarka mishiino hardware; auto waxyaabaha instrumentation iyo waalka warshadaha baxaan nadiifinta, derusting, sii xoogeysaneyso, yeeesha iyo wixii la mid ah.
Next: Shot Aluminum / Aluminum Goo Wire Shot
nadiifinayo Shot Zinc
daahir ah Zinc Wire
Zinc Goo Wire Shot
Zinc toogtay Qaylo
shot ahama Steel Goo Wire